Waxaa jira wakhti oo aad markab ka macruufka ku boodaan si ay Android, kaliya si aad u ogaato in dhamaan aad jadwalka muhiim ah, sida ballan, kulan, dhacdooyinka, ayaa weli ku jira iCloud. Ma doonaysaa in lagu daro jadwalka iCloud on Android phone ama laakiin ka heli jid lahayn? Ha welwelin. Waa fud. Maanta, maqaalkan aad muujinaysaa 2 siyaabo sahlan tahay in la sameeyo kala iibsiga ama jadwal u hagaagsan iCloud in Android. Akhri.
Habka 1. Ku dar iCloud Calendar in Android via iCloud iyo Google Calendar
Habka 2. Share iCloud Calendar la Android la MobileTrans 1 Click
Tani waa hab si xor ah u gelin iCloud jadwalka telefoonka Android ama kiniin ah inta aad ku leedahay xisaabta Google. By isticmaalaya habkan, waxaa dhoofin doonaa jadwalka iCloud in file .ica ah, ka dibna waxaad gali kartaa in jadwalka Google. Ugu dambeyntii u hagaagsan account Google la telefoonka Android ama kiniin.
kalandarka dhoofinta iCloud sida ICA. file> geliyaan in jadwalka Google> nidaameed Google la Android
Teleefoon Android ama kiniin
Tallaabo-tallaabo hage ku saabsan sida loo dhoofin jadwalka iCloud in Android
Tallaabada 1. Daahfurka website iCloud iyo calaamad in aad xisaabta.
Tallaabada 2. Click Calendar in ay galaan guddi ay gacanta jadwalka.
Tallaabada 3. Dooro category taariikh, sida Calendar, ama shaqo. Riix share icon.
Tallaabada 4. In wada hadal pop-up ka, sax jadwalka Dadweynaha . Markaas, doonistii url a muujinaysaa ilaa, taas oo ka bilaabanayso webcal.
Tallaabada 5. Copy URL iyo paste duurka cinwaanka loo siiyaa biraawsarkaaga ah. Fadlan ha taabo gala ama ku soo noqo .
Tallaabada 6. Change "webcal" in "http", oo saxaafadda u gala ama ku soo noqo .
Tallaabada 7. ICA A. file oo keydisa jadwalka iCloud si toos ah lagala soo bixi doona si aad u computer.
Tallaabada 8. Open Google browser oo saxiix in aad xisaabta Google. Markaas, abuurtaan website Google jadwalka.
Tallaabada 9. On column bidix, guji saddexagalka beddeli wanaagsana in kale jadwalka tab.
Tallaabada 10. In menu hoos-hoos, dooran jadwalka Import . Browse your computer iyo dajiyaan file .ica in aad jadwalka Google.
Hadda, aad si guul leh u geliyaan jadwalka iCloud in Google. Next, kaliya aad u baahan tahay in aad u hagaagsan account Google la telefoonka Android ama kiniin.
Tallaabada 11. On telefoonka Android ama kiniin ah, u tag Settings > Accounts & hagaagsan .
Tallaabada 12. Dhammaan xisaab aad saxiixday galay waxaa lagu muujiyey. Haddii account Google jiro, kaliya ka jaftaa account Google.
Tallaabada 13. Haddii aan, ka jaftaa dar xisaabta . Raadi account Google oo saxiix u galay.
Tallaabada 14. Markaas, shaashadda account u hagaagsan Google, sax nidaameed Calendar > nidaameed hadda . Marka way dhamaatay, waxaad ka arki kartaa jadwalka iCloud telefoonka Android ama kiniin.
Inkasta oo hab 1 kuu sheegayaa in kaalendarka ka soo iCloud wareejiyo Android, waxa uu si adkayn. Waxaad inay halgan u waddo dheer ka hor inta uu soo dhameystay. Maxaa dhacaya haddii aad leedahay xisaabta Google lahayn? Waa in aad marka hore la abuuro hal. Sidaas darteed, si ay u hagaagsan jadwalka iCloud in phone Android ama kiniin si fudud, waxaad taageero ka ah qalab cid saddexaad soo jiidi kara. Wondershare MobileTrans waa aalad xirfad iCloud in Android kala iibsiga taariikheed, oo uu idin ​​wada siiyo awood ay ku kaalendarka ka soo iCloud wareejiyo Android la mid click .
An iPhone, iPad ama iPod taabashada (macruufka 9/8/5/6/7 taageeray)
Teleefoon Android ama kiniin (Android 2.1 iyo ka dib oo ay taageerayaan)
Laba fiilooyinka USB
Gal account iCloud on iPhone, iPad ama iPod taabashada
Sida loo dhoofiyo iCloud Calendar in Phone Android ama Tablet
Bilow, download iyo rakibi Wondershare MobileTrans on PC. Waxaa Orod oo guji Phone in hab Transfer Phone.
Tallaabada 2. Isku Your qalab Android oo iDevice in PC
Isticmaal fiilooyinka USB in ay ku xidhmaan aad iPhone, iPad ama iPod taabto si PC iyo sidoo kale Android phone ama kiniin. Ka dib markii la ogaado, labada qalabka tusi doonaa in uu furmo.
Tallaabada 3. Transfer kaalendarka ka soo iCloud in Android
By default, dhammaan waxyaabaha kuu soo gudbin karaa waa la saxay. Si aad u gudbiyaan jadwalka oo keliya, waxaad u baahan tahay inaad uncheck ka kooban kale. Markaas, riix Start Copy . Hanaanka wareejinta ayaa ka bilaabma. In geeddi-socodka, hubi in aan barkinta labada qalabka aad.
Bedelka Messages in New Android Phone
> Resource > iCloud > Sida loo hagaagsan iCloud Calendar on Phone Android oo Tablet